लक्ष्मीपूजाको पावन अवसरमा फिल्म ‘लक्ष्मी रानी’ को शुभ मुहूर्त ! – ebaglung.com
लक्ष्मीपूजाको पावन अवसरमा फिल्म ‘लक्ष्मी रानी’ को शुभ मुहूर्त !
२०७५ कार्तिक २१, बुधबार २२:१२	Top News, अन्य समाचार, मनोरञ्जन
काठमाडौँ, २०७५ कात्तिक २१ । लक्ष्मीपूजा छेकोमा फिल्म ‘लक्ष्मी रानी’ निर्माण घोषणा भएको छ । बुधबार राजधानीमा एक गीत रेकर्ड गर्दै फिल्मको शुभ मुहूर्त गरियो ।
महिला प्रधान फिल्मलाई सोसल ड्रामा जनरमा राखिएको छ । यस फिल्मबाट अभिनेत्री समेत रहेकी शुभेच्छा थापा निर्देशकको रुपमा डेब्यु गर्दैछिन् । लिड फिमेल भूमिकामा पनि छिन् र पटकथा लेखन पनि उनी स्वयमको हो ।
लामो समयदेखि पत्रकारितामा सक्रिय विनोद त्रिपाठी फिल्मबाट निर्माताको रुपमा डेब्यु गर्दैछन् । फिल्ममा उनको समेत मुख्य भूमिका हुनेछ । विगतमा कान्तिपुर दैनिकसँग आबद्ध उनी अहिले सौर्य दैनिकका सम्पादक समेत हुन् । माओवादी द्धन्द्धकालमा चर्चित पत्रकार त्रिपाठी राजनीतिक रिपोर्टिङमा दखल राख्छन् ।
त्रिपाठीले ‘लक्ष्मी रानी’ नेपाली फिल्ममा कोशेढुंगा बन्ने दाबी गरे । निर्देशक थापाका अनुसार फिल्मले आधुनिक र ग्रामिण दुई आयामका महिलाको संघर्ष र प्रवृत्तिको कथा भन्छ । टिजर पोस्टरमा सहरिया युवतीलाई बेद र ग्रामिण युवतीलाई अंग्रेजी पुस्तक समातेको चित्रण छ ।
फिल्ममा शुभेच्छा र विनोदसहित भोजपुरी फिल्मका सुपरस्टार परदेशी शाह, जयकिसन बस्नेत, मिथिला शर्मा, श्याम राई र पल्पसा डंगोलको समेत मुख्य भूमिका हुनेछ ।
आगामी वर्ष २०७६ को लक्ष्मीपूजालाई रिलिज डेट तोकिएको छ । बुधबार बबुल गिरीद्धारा संगीतबद्ध देउसी गीत रेकर्ड गरियो । जसमा ध्रुव अधिकारी र संगीता तिमल्सिनाले स्वर दिएका छन् । शब्द शंकर अधिकारी घायलको हो । संगीतकार गिरीले तिहारसम्बद्ध गीत समेटिएको बताए ।
दिव्य सुवेदीको छायांकन रहेको फिल्म पुसदेखि फ्लोरमा जानेछ । सुदुरपश्चिमको दार्चुलमा छायांकन गरिने फिल्मको बजेट ७० लाख आंकलन गरिएको निर्माता त्रिपाठीले जनाए ।